ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » အလှအပ » အရေပြားကျန်းမာရေး
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Phyo Wai Lynn | ရေးသားသူ Aye Thi Mon
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ 4, 2020 . 1 min read
G6PD ရှိရင် ဘာတွေရှောင်ရမလဲ……..
G6PD ရှိရင် ဘာတွေရှောင်ရမလဲ........ G6PD အင်ဇိုင်း ချို့တဲ့တဲ့ ပြဿနာကို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကို သတိထား ရှောင်ကြဉ်ဖို့ လိုပါမယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ စက်တင်ဘာ 1, 2021 .2mins read
Boysenberry ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး
Boysenberry ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး က ဘာတွေဖြစ်မလဲ.... အတူတူဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ကျန်းမာစေပါတယ်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဩဂုတ် 30, 2021 .2mins read